ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီရဲ့ အကျိုးရှိစေတဲ့ ကစားသမားခေါ်ယူမှုများ
11 Oct 2018 . 4:10 PM
ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်တဲ့ နေရာမှာ အောင်မြင်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ဖို့ ကစားသမားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပြင် ကံတရားကလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ တခြားအသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြကစားနေလို့ ကြေးကြီးပေးခေါ်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်အသင်းရောက်မှ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေဟာလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီရဲ့ အကျိုးရှိစေတဲ့ ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေကို Goal.com အားကစားဝက်ဆိုက်ဘ် ကဖော်ပြခဲ့ပြီး ဒီအထဲမှာ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ယော်ဂျင်ဟို Jorginho ၊ ဟီဂွါအင် Higuain နဲ့ အယ်လ်ကာဆာ Alcacer တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နာပိုလီကနေ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ ယော်ဂျင်ဟိုရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဟာမှန်ကန်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယော်ဂျင်ဟိုဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကွင်းလယ်မှာ ပုံမှန်တစ်နေရာကို အမိအရဆုပ်ကိုင် နိုင်ခဲ့သလို သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ ကစားဟန်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကြောင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ဟာ အရင်ကထက်တည်ငြိမ်မှုပိုရှိလာခဲ့ပြီး တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းစတင်ရာမှာလည်း အရင်ကထက်ပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာကနေ ဒေါ့မွန်ကို အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ အယ်လ်ကာဆာရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဟာလည်း အကျိုးရှိတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အယ်လ်ကာဆာဟာ လက်ရှိအချိန်ထိ ဒေါ့မွန်အသင်းအတွက် (၄)ပွဲမှာ (၇)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ ပစ်ပယ်ခံ တိုက်စစ်မှုး ဟီဂွါအင်ဟာလည်း အေစီမီလန်အသင်းမှာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေပြနေပါတယ်။ ဟီဂွါအင်ကြောင့် အေစီမီလန်အသင်းဟာ အရင်ကထက်ပိုကောင်းလာတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဟီဂွါအင်ဟာ လက်ရှိအချိန်ထိ အေစီမီလန်အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ(၇)ပွဲမှာ (၆)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီရဲ့ အကျိုးရှိစေတဲ့ ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Alcacer ( Dortmund )
2. Bamba ( Lille )
3. Cancelo ( Juventus )
4. Higuain ( AC Milan )
5. Jorginho ( Chelsea )
6. Maddison ( Leicester )
7. Patricio ( Wolverhampton )
8. Piatek ( Genoa)
9. Plea ( Mönchengladbach )
10. Richarlison ( Everton)
11. Andre Silva ( Sevilla )
12. Vaclik ( Sevilla )
13. Witsel ( Dortmund )
14. Dilrosun ( Hertha BSC )
15. Mothiba ( Strasbourg )
Photo: Goal.com , Stadium Astro
ဒီနှဈဘောလုံးရာသီရဲ့ အကြိုးရှိစတေဲ့ ကစားသမားချေါယူမှုမြား
ကစားသမား အပွောငျးအရှပွေု့လုပျတဲ့ နရောမှာ အောငျမွငျတဲ့ အပွောငျးအရှဖွေ့ဈဖို့ ကစားသမားရဲ့စှမျးဆောငျရညျအပွငျ ကံတရားကလညျးလိုအပျပါတယျ။ တခွားအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွကစားနလေို့ ကွေးကွီးပေးချေါခဲ့ပွီး ကိုယျ့အသငျးရောကျမှ မှနျးခကျြနဲ့ နှမျးထှကျမကိုကျတဲ့ ဖွဈရပျတှဟောလညျး ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဒီနှဈဘောလုံးရာသီရဲ့ အကြိုးရှိစတေဲ့ ကစားသမားချေါယူမှုတှကေို Goal.com အားကစားဝကျဆိုကျဘျ ကဖျောပွခဲ့ပွီး ဒီအထဲမှာ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ ဖွဈကွတဲ့ ယျောဂငျြဟို Jorginho ၊ ဟီဂှါအငျ Higuain နဲ့ အယျလျကာဆာ Alcacer တို့ပါဝငျခဲ့ကွပါတယျ။
နာပိုလီကနေ ခယျြလျဆီးအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ ယျောဂငျြဟိုရဲ့ အပွောငျးအရှဟေ့ာမှနျကနျတဲ့ အပွောငျးအရှတေ့ဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ယျောဂငျြဟိုဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးကှငျးလယျမှာ ပုံမှနျတဈနရောကို အမိအရဆုပျကိုငျ နိုငျခဲ့သလို သူ့ရဲ့တညျငွိမျတဲ့ ကစားဟနျနဲ့ကောငျးမှနျတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတှကွေောငျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျဟာ အရငျကထကျတညျငွိမျမှုပိုရှိလာခဲ့ပွီး တိုကျစဈလမျးကွောငျးစတငျရာမှာလညျး အရငျကထကျပိုကောငျးလာခဲ့ပါတယျ။
ဘာစီလိုနာကနေ ဒေါ့မှနျကို အငှားနဲ့ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ အယျလျကာဆာရဲ့ အပွောငျးအရှဟေ့ာလညျး အကြိုးရှိတဲ့ အပွောငျးအရှဖွေ့ဈခဲ့ပါတယျ။ အယျလျကာဆာဟာ လကျရှိအခြိနျထိ ဒေါ့မှနျအသငျးအတှကျ (၄)ပှဲမှာ (၇)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ ပဈပယျခံ တိုကျစဈမှုး ဟီဂှါအငျဟာလညျး အစေီမီလနျအသငျးမှာ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးတှပွေနပေါတယျ။ ဟီဂှါအငျကွောငျ့ အစေီမီလနျအသငျးဟာ အရငျကထကျပိုကောငျးလာတယျလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ။ ဟီဂှါအငျဟာ လကျရှိအခြိနျထိ အစေီမီလနျအသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ(၇)ပှဲမှာ (၆)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီနှဈဘောလုံးရာသီရဲ့ အကြိုးရှိစတေဲ့ ကစားသမားချေါယူမှုတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။